Hogamiyaha Puntland Siciid Deni oo maanta dib ugu laabtay…
By axadle On Jul 19, 2020
Hogamiyaha Dowlad-goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa gaaray magaaladda Dhuusamareeb ee xarunta Dowlad-goboleedka Galmudug.
Hogamiyaha Puntland waxaa garoonka ku soo dhaweeyay Madax ka tirsan Dowlad-goboleedka Galmudug waxaana loo galbiyay gudaha Magaaladda Dhuusamareeb halkaasi oo ay ku suganyihiin Hogamiyayaasha Xukumadda Faderaalka Soomaaliya iyo kuwa Dowlad-goboleedyada dalka.
Hogamiyaha ayaa lagu wadaa in uu shirar la qaato Hogamiye Farmaajo ka hor furitaan shirka golaha Amniga qaran oo uu shir gudoomi doono Hogamiyaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaas oo sida qorshuhu yahay maalinta bariya ka furmaya Dhuusamareeb.
Xafiiska Wasiirka 1 aad ee Xukumada iyo Madaxweynayaasha Maamul goboleedyada dalka ayaa isku dayaya in ay wada hadal siiyaan Hogamiye Farmaajo iyo Hoggaamiyaasha Jubbaland iyo Puntland oo khilaaf xooggan kale dhexeeyo.
Ka hor furitaan shirka ayaa madaxdu qorshaynayaan in ay isla qaataan ajandayaasha looga hadlayo shirka golaha Amniga qaranka oo Dhuusamareeb lagu qabanayo haatan oo maadama sanadkii la soo dhaafay aan la qaban sababo la xiriira khilaafka Xukumadda Faderaalka iyo Dowlad-goboleedyada dalka qaarkood.